.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Myanmar Blogger Templates
ဒီ Myanmar Blogger Templates က ကျွန်တော် လုပ်ခဲ့တဲ့ Template တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့တောင် ပြောလို့
ရပါတယ်။ Blogger က ရိုးရိုး Template တစ်ခုကိုပဲ ပြန်ပြင်ထားတာပါ။ ခုတော့ အရင်ပုံစံနဲ့တစ်ခြားစီ ဖြစ်သွားပါပြီ။
နိုင်ငံခြား ဝဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ တင်ထားတဲ့ Template တွေထက် မသာရင်တောင် မညံ့ပါဘူး :D ။ ကျွန်တော် တစ်ညနဲ့
တစ်ရက် အိပ်ရေးပျက်ခံ ၊ အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်ထားတာပါ။ နမူနာ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပါ။
ကြိုက်လို့ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Template ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Menu ရော ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Download: Myanmar Blogger Templates
မှတ်ချက်။ ။ Template ထဲက ကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ ဆိုဒ်လင့်ကို မဖျက်ဖို့ မပြင်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်နော်..
အားလုံးအတွက် အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်ပေးထားတာဖြစ်လို့ စေတနာကိုတော့ လေးစားတန်ဖိုးထားပေးကြပါလို့..။
တစ်ခြား စာသားအရောင် လင့်အရောင်စသည်ဖြင့် မိမိမကြိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 05:57
Labels: Blog, Coding, Template